आगामी दिनमा एमालेमा अध्यक्षपछिका महत्वपूर्ण पदमा को को पुग्ने हुन् - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशआगामी दिनमा एमालेमा अध्यक्षपछिका महत्वपूर्ण पदमा को को पुग्ने हुन्
आगामी दिनमा एमालेमा अध्यक्षपछिका महत्वपूर्ण पदमा को को पुग्ने हुन्
महाधिवेशनमार्फत पुनः अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने निश्चित भइसके पनि अध्यक्ष बाहेकका अन्य १४ केन्द्रीय पदाधिकारी पदमा को–को नेता आउने हुन् भन्ने चासो एमाले वृत्तमा बढ्दै गएको छ । वडादेखि पालिका र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत सहमतिमा चयन गरेको एमालेले दशौं महाधिवेशन पनि सहमतिमै गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिने बताउदै आएको छ । पार्टी विभाजनको पीडा भएर पनि त्यसलाई बिर्सन र परिपूर्ति गर्न देखावटी एकता देखाउन पनि सहमतिमा नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने एमालेमा बाध्यतामा छ ।
तर, नेतृत्वमा आकांक्षी धेरै हुने भएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न उतिकै चुनौति रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय पदाधिकारीको आकांक्षा राख्ने धेरैजसो नेताहरु यसअघिको महाधिवेशनमार्फत नै पदाधिकारी भैसकेका छन् । र, उनीहरुले अहिलेको पदभन्दा माथिल्लो पदको आकांक्षा राख्नु स्वभाविक पनि मानिन्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पार्टीमा लामो समय काम गरेकालाई पनि अवसर दिनुपर्ने बाध्यता एमालेमा छ । यस्तो अवस्थामा १५ पदाधिकारीका लागि झण्डै दोव्वरको संख्यामा आकांक्षीहरु मैदानमा छन् । मैदानमा भएपनि उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा मुख भने खोलिसकेका छैनन् ।
एमालेले गत असोजमा विधान परिवर्तन गरेर पहिलाको पदाधिकारी पदमा केही हेरफेर गरेको छ । यद्यपि संख्या भने उत्तिकै छ । जस्तो कि– अध्यक्ष, महासचिव एक–एक जना भए–पनि पाँच उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकसहित अन्य चार उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ भने महासचिव र उपमहासचिव एक–एक तथा ७ सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
रावल र भुसालले के गर्लान् ?
‘सहमतिको महाधिवेशन बनाउने भनिएको छ । भित्री चाहाना एउटा भएपनि अहिलेको अवस्थामा बाहिर बोल्न उपयुक्त हुने अवस्था छैन । त्यसैले पनि अहिले नै मुख खोल्न समस्या छ । पछि के हुन्छ त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्नेछ’, हाल उपाध्यक्ष रहिसकेका एक नेताले रातोपाटीसँग भने,‘सहमति भनेर पाखा नै लगाउने काम भयो भने त मान्न कठीन छ ।’
विगतमा अध्यक्ष ओलीविरुद्धको आन्दोलनमा लागेका र पार्टी विभाजनका बेला ओलीलाई नै साथ दिएका नेताहरुमध्ये उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल विद्रोही नेताका रुपमा चिनिन्छन् । तर, दुवै नेता अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि भनेर गरेको १० बुँदे अक्षरश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिढिन पुगेका छन् ।
विगतमा तेस्रो धार भनेर चिनिएका उनीहरुमध्ये धेरै नेताहरु अध्यक्ष ओलीको कित्तामा पुगे पनि रावल र भुसाल भने अहिलेसम्म आफुलाई फरक कित्तामा उभ्याइरहेका छन् । रावलले त वडा, पालिका र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा ओली पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पनि जनाइसकेका छन् । उनले सुदुरपश्चिम पुगेर आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपरे पछि नहट्ने समेत बताइसकेका छन् ।
एमालेका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘१० भाइको टिमबाट भीम रावल वा घनश्याम भुसालमध्ये एकजना सहमतिकै आधारमा अध्यक्षमा उठ्ने सम्भावना छ । अथवा, रावल अध्यक्ष र भुसाल महासचिवमा प्यानल बनाएर उठ्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसबारे रावल र भुसालबीच छलफल हुन बाँकी छ ।’
उपाध्यक्षका दाबेदार को-को ?
उपाध्यक्षद्वय विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको र वामदेव गौतम पार्टी छाडेकाले उनीहरुले कुनै पदमा दावा गर्ने छैनन् । यी दुईबाहेक हाल पार्टीमा रहेका तीनजना उपाध्यक्षले खोज्ने भनेको अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै हो । अध्यक्ष ओलीबाट रिजर्भ भैसकेको छ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका तीन उपाध्यक्षले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक मानिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, यसअघि महासचिव भैसकेका ईश्वर पोखरेल पनि बरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार हुन् । किनभने, उनलाई महासचिवमा तेहर्याउने सुविधा विधानले दिएको छैन । यसो हुँदा उनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावी रहने नै भयो । उनले सांकेतिक रुपमा आफूलाई बरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा उभ्याई नै सकेका छन् । यस्तो हुँदा बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि नै धेरैजनाको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
उपाध्यक्षपछि सर्वाधिक नेताहरुको चाहनाको अर्को पद हो–महासचिव । यो पदका आकांक्षी पनि उत्तिकै छन् । हाल सचिव रहेका, उपमहासचिव रहेका र अन्य पार्टीबाट आएकाहरु पनि महासचिव पदका आकांक्षी छन् । त्यसबाहेक नवौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा नपरेकाहरु पनि यसपटक महासचिवका लागि आकांक्षी छन् ।
पावरको हिसावले पनि अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद महासचिव हो । अहिले महासचिव हुन सके अर्कोपटक अध्यक्षको दावी गर्न समेत सहज हुने र संगठनमा पकड रहने भएकाले यो पद धेरैको रोजाइ बन्न पुगेको हो ।
को पर्ला ओलीको रोजाइमा ?
एमाले नेताहरुका अनुसार पदाधिकारीको जुनसुकै पद पाउन अध्यक्ष ओली सकारात्मक हुन जरुरी छ । किनभने, अध्यक्ष आफू बन्ने भएपछि उनले आफू अनुकुलकै टीम बनाउने छन् । तर, ओलीलाई पनि नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न कठीन रहेको ओली निकटकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसका लागि ओलीको विश्वास जित्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
तर, सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पदाधिकारीको जुनसुकै पदमा पनि अहिलेको अवस्थामा स्पस्ट र उच्च दृष्टिकोण भएका नेताहरु आउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्,‘चुनाव भए पनि नभए पनि एमालेको भोलि अध्यक्ष हुने केपी ओली नै हो । त्यसकारण अध्यक्षको सोचाइ र दृष्टिकोणमा यो पार्टीलाई कस्तो बनाउने, समृद्धिको अभियानलाई कसरी अघि बढाउने र कसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मूल्यांकन पक्कै पनि होला ।’
उनले पार्टीमा योगदान, निरन्तरता र क्षमतासहितको विश्लेषणका आधारमा नेताहरुले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । ‘पार्टीलाई सांगठनिक र वैचारिक हिसावले कसले अघि बढाउन सक्छ भन्ने र हामीले राज्यलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ’, गुरुङको भनाइ छ ।
Previous articleभारतको सहयोगमा नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा ५० हजार आवास पुनर्निर्माण
Next articleबीआरआई परियोजना अन्याेलमै